umngcele weqabunga owakhiwe ngo - Moyi Mili
umngcele weqabunga owakhiwe
Esitolo sethu esiku-inthanethi ungathenga umthungo owenziwe ngesandla notshaniwe onamaqabunga. Isebenza kahle njengendawo ongayidlala kusukela isencane, ingaba umbhobhisi omuhle noma umbhede embhedeni.Lawa matilasi amahle abambekayo ayindlela enhle yamatende aseMoo Mili.
Umata othambile futhi onethezekile ungasakazeka noma kuphi - egumbini lokuphumula, eethala noma engadini. Amakhethini enziwe ngamahlamvu welineni angafanelani kahle nemicamelo nemikhondo evela ekuqoqweni kwehlathi elifanayo. Lezi zindatshana zenziwa ngokucophelela okuningana ngemininingwane.
Imithi yeqabunga lezingane "Ilineni yemvelo"
"Grey" mat iqabunga lezingane
Ikhekhe lelenge lezingane "Pinki ligcwele"
"Isinaphi" mat iqabunga izingane
Ikhephu leqabunga lezingane "Elimhlophe nelimpunga"
I- "Morskie Oko" mat iqabunga lezingane